नेपालमा उत्पादन हुन् थाल्यो पल्सर मोटरसाइकल, भदौ देखि नेपाली बजारमा आउने ! « Etajakhabar
नेपालमा उत्पादन हुन् थाल्यो पल्सर मोटरसाइकल, भदौ देखि नेपाली बजारमा आउने !
प्रकाशित मिति : २५ श्रावण २०७६, शनिबार १८:३०
काठमाडौं । बजाजको सर्वाधिक लोकप्रिय नेकेड मोटरसाइकल एनएस २०० को एफआइ भर्सन भदौ १० गतेदेखि भृकुटीमण्डपमा हुने नाडा अटो शोमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । यो मोटरसाइकल भारतीय बजारमा भने फेस्टिभ सिजनमा मात्र आउने छ । यो मोटरसाइकल बजाजका लागि नेपालको आधिकारीक वितरक एचएच बजाजले नेपालमा नै उत्पादन गरेको हो ।
यो मोटरसाइकल बजाजको नवलपरासीमा रहेको प्लान्टमा निर्माण भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । एनएस २०० एबीएससहित एफआई इन्जिनमा आउने छ । २०० सीसी नेकेड रोडस्टर मोटरसाइकल एनएस २०० उच्च प्रदुषण मापदन्ड अनुसारको हुने छ । हाल, कार्बुरेटर सेटअपमा रहेको यो मोटरसाइकल नियोन ब्ल्यु, एल्लो र रेडस्टिकर सहित विभिन्न बडी प्यानल र अलोय रिमम आउने कम्पनीले जनाएको छ ।
यसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्पेकको फ्युल इन्जेक्टेड एसओएससी फोर भल्भ लिक्वीड कुल्ड ट्रिपल स्पार्क इन्जिन लगाइएको छ । यसले ९ हजार ७५० आरपीएममा २३.१७ बीएचपी पावरका साथै १८.३ एनएम टर्क उत्पादन गर्छ । यसमा मोडलमा ६ स्पीड गियरबक्स रहेको छ । फुल एलइडी हेडलाइट र सेमि डिजीटल इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोलको विशेषता प्रदान गरिएको बाइकमा एनालग टेकोमिटर जस्ता विशेषता दिइने छ । हाल नेपाली बजारमा एनएस २०० कार्बुरेटर भर्सनमा उपलब्ध रहेको एनएस २०० को मूल्य ३ लाख १९ हजार ९०० रहेको छ । तर, नयाँ इन्जिनमा एबीएससहित आउँदा मूल्य भने केही बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । उक्त बाइकको मूल्य ४ लाख रुपैयाँ हाराहारी पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
काठमाण्डौ – नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सका तीन पाइलटसहित नौ उडान कर्मचारीमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण पुष्टि
प्रधानमन्त्री ओलीलाई पूर्व माओवादीका ६ भाइको दह्रो साथ
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक विवादमा सहमति खोज्न आज पनि प्रधानमन्त्री
नेपाल प्रहरीको आइजिपिमा शैलेश थापा क्षेत्री नियुक्त
काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको २८ औं महानिरीक्षक (आईजी)मा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) शैलेश थापा क्षेत्री नियुक्त
उपत्यकाका यी २२ स्थानमा भेटिए कोरोना सङ्क्रमित
काठमाण्डौं – पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा २८ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।
कौडीको भाउमा चिया बेच्दा धुरुधुरु रुन मन लाग्छ : चिया किसान
२१ असार २०७७, आईतवार १२:४१
छिट्टै हवाई क्षेत्र खुलाउन सरकारले थाल्यो यस्तो तयारी
१९ असार २०७७, शुक्रबार १९:३४
बैंक होस त यस्तो ! असार महिनाको ब्याज मिनाहा
१८ असार २०७७, बिहीबार १३:०४
१७ असार २०७७, बुधबार १२:४५